Xiddiga Garabka Ka Ciyaara Ee Kooxda Arsenal Willian Oo Qirtay Inuu Doonayay Inuu Heshiis Qandaraas Ah La Saxiixdo Chelsea.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Xiddiga garabka ka ciyaara ee kooxda Arsenal Willian oo qirtay inuu doonayay...
Xiddiga garabka ka ciyaara ee Arsenal Willian ayaa qirtay inuu doonayay inuu heshiis qandaraas ah la saxiixdo Chelsea ka hor inta uusan u dhaqaaqin Emirates Stadium xagaaga.
Xiddiga reer Brazil ayaa ku guuldareystay inuu heshiis cusub la galo Chelsea wuxuuna arkay qandaraaskiisa inuu dhacayo, laakiin taasi uma aheyn isku day la’aan labada dhinac Willian iyo Chelsea labaduba waxay rabeen inay baabi’iyaan kordhinta, laakiin waxay ku guuldaraysteen inay ku heshiiyaan shuruudaha, taasoo u saamaxday xidiga garabka ka dheela inuu ku biiro Arsenal.
Marka la eego xafiiltankii u dhexeeyey labada naadi, waxay iska caddahay inuu ahaa tallaabo muran badan dhaliyay oo ku saabsan qaybta Willian, laakiin wuxuu u qirtay kanaalka YouTube-ka ee UOL inuu yahay mid uu doonayay inuu ka fogaado inuu marka hore sameeyo.
Way adkeyd in go’aankaas la gaaro, ma fududaan, ayuu qirtay. “Sababtoo ah, sida aad sheegtay, xafiiltanka u dhexeeya labada naadi waa mid aad u weyn. Ma aheyn go’aan sahlan oo ah inaan Chelsea tago kuna biiro Arsenal. Waxaa si fiican looga fikiray, go’aan fikir leh, oo aan la hadlay xaaskayga iyo xitaa wakiilka marar badan.
Fiiri, waxaan u maleynayaa in taageerayaasha qaar ay iweydiiyeen su’aashan Laakiin badidoodu way fahmeen sababta oo ah kagam tagin kooxda dagaal, Qof walba wuu ogaa shuruudaha, runti waxaan doonayay inaan joogo.
Waxaan ku dhameysanay inaan heshiis la gaarin, waxaan kudhamey seddex sano, Chelsea waxay dooneysay inay labo siiso, qof walbana wuu ogyahay sheekadan. Taasi waa sababta aan u dhammaaday inaan baxo.”
Waxaa jiray kooxo badan oo xiiseynaya Willian, kuwaas oo damacoodu ahaa inay had iyo jeer sii joogaan London, wuxuuna sii waday inuu qirto in tababaraha Arsenal Mikel Arteta uu ciyaaray sharci weyn si uu uga dhaadhiciyo inuu sameeyo talaabada muranka dhaliyay.
“Mid ka mid ah waxyaabaha igu kalifay inaan go’aansado inaan aado Arsenal runtii waa wada hadalada kala duwan ee aan la yeeshay Mikel Arteta, sidoo kale Edu,” ayuu yiri Willian.
Arteta waxay ka caawisay qancinta Willian
Waxay iga dhaadhiciyeen inaan halkaas aado inay noqon laheyd mashruuc runtii qabow, in runtii ay ii fiicnaan laheyd inaan halkaas tago. Taasi waxaan noqon lahaa ciyaaryahan aad muhiim ugu ah kooxda. Taasi waxay rabeen inay bedelaan falsafada kooxda, si ay ugu suurta gasho Arsenal inay mar kale la dagaallanto Premier League, inay mar kale ka ciyaaraan Champions League.
“Markaa waxaa jiray wada hadalo dhowr ah oo aan lahaa, dhowr wada hadal oo iga farxiyay, sidaa darteed waa sababta aan ugu dambeyntii go’aankaan gaadhay. Laakiin runtii ma fududaan in go’aankaas la gaadho, waxay ahayd in si wanaagsan looga fikiro.
Previous articleJoogitaanka Lionel Messi ee Barcelona oo Sheeko Cusub ku soo korortay
Next articleRonald Keoman oo hadlay sababtii uu keedka u dhigay Antonio Griezmann